Nhau - Kuita uye kushanda musimboti wetatu eccentric simbi yakaoma chisimbiso butterfly vharuvhu
Kuita nekushanda musimboti wetatu eccentric simbi yakaoma chisimbiso butterfly vharuvhu
Iyo inoshanda musimboti wetatu eccentric simbi yakaoma chisimbiso butterfly vharafu:
Kune katatu eccentric simbi yekuisa chisimbiso shavifuru mavharuvhu, kuwedzera kune maviri eccentricity yevhavha yemidziyo uye iyo vharafu ndiro, iyo yekuisa chisimbiso pamusoro pevhavha yevhavha uye chigaro chevhavha iri muchimiro che oblique truncated koni (uku ndiko kwechitatu eccentricity izvo zvinonzi katatu eccentricity). Kana vharuvhu ikavharwa, ndiro yevhavha inosundirwa kumberi nekuda kweiyo eccentricity. Iko hakuna kupesana pakati payo vharuvhu ndiro nechigaro chevhavha panguva yekuvhara maitiro. Iyo vharafu ndiro yakamanikidzwa zvakananga pachigaro chevhavha, nekudaro kuve nechokwadi chehupenyu hwebasa revhavha; uyezve, nekuda kweiyi vharafu Iyo yekuisa chisimbiso (ingave yakaiswa pachigaro chevhavha kana ndiro yevhavha) ine mwero wakati wekusimba, uye pane chitsama chidiki chekubvumidzwa pakati pebasa uye neringi rinosungirirwa mumhete yakasununguka kuti igadzire mhete yakasununguka yakadzingwa zvishoma; iyo vharuvhu ikavharwa, inobatwa neIye semhedzisiro yesimba rekuvhara, iyo elastomer yekuisa mucherechedzo mhete inogona otomatiki kuenda kune iyo nzvimbo iyo simba iri yunifomu zvakanyanya; inosanganiswa nediki diki rekushomeka kweringi mhete, iyo yekuisa chisimbiso pachigaro chevhavha yakaomeswa zvakaenzana kuti uwane yakanakisa yekuisa chisimbiso nyika.
2.Kushandura shanduko yemavharufuru mavharuvhu ane akasiyana eccentric zvivakwa:
Sezvo kuwanda kwe eccentricity yevhavha yevhavha ichiwedzera, uye ukobvu hwendiro yevhavhavha iri zvakare mukobvu, kuramba kwemvura inoyerera kuburikidza nekatatu eccentric butterfly vharuvhu inowedzera; sezvo huwandu hwekushomeka kwevhavhavhavhavhavuruvhi hunowedzera, iko kushanda kwevhavha kunochinja zvakanyanya. Kubva pakuenzaniswa kwemavara mana akasiyana butterfly mavharuvhu, zvinogona kuoneka kuti matatu-eccentric shavishavi vharuvhu inogona kuburitsa yakakura kumanikidza kudonha uye inogona kushandiswa seyakagadzika vharuvhu; kudzvinyirira kunodonha kana mvura ichiyerera kuburikidza nevhavha ichiwedzera nekuwedzera kwenhamba ye eccentrics; asi zvichienzaniswa nezvimwe Zvichienzaniswa neasina-shavhuru mavharuvhu, iko kudzvinyirira kudzvanya katatu eccentric shavishavi mavharuvhu achiri mashoma. Sezvo kuwanda kwe eccentricity yevhavhavhavuruvharuvhu vharuvhu inochinja, iko kuiswa kwekuisa chisimbiso kwechigaro chevhavhavha kunochinjawo zvinoenderana. Iyo katatu eccentric butterfly vharafu ine yakanakisa chigaro chekuisa chisimbiso kuita. Sezvo kuwanda kwekusaziva kunowedzera, iyo torque inodikanwa pakuvhura nekuvhara yevhavha inoderera. Naizvozvo, torque inodikanwa pakuvhurwa nekuvharwa kweatatu eccentric butterfly vharuvhu idiki zvakanyanya pane iya yemamwe marudzi emavharufuru mavharuvhu. Nekuchinja kwehuwandu hwekushomeka, iyo tembiricha uye yekumanikidza giredhi renji uye inoshanda tembiricha renji yevhavhavhavhavuruve zvakare ichave neshanduko huru. Iyo inoshanda tembiricha uye yekumanikidza giredhi renji yeatatu eccentric butterfly vharuvhu haina kufananidzwa nedzimwe mhando dzemavharufuru mavharuvhu.
3. Kubatsira kwetatu eccentric butterfly vharafu:
Kuita kwakanaka kwekucheka Iyo katatu eccentric simbi yekuvhara sevhifuru vharuvhu inoshandisa torque kucheka vharuvhu, saka kune yakanakisa yekuisa chisimbiso kuita pachigaro chevhavha, saka inonzi zero-leakage vharafu. Iyo solid particles kana tsvina mune yepakati haina hunyanzvi hwakajeka pakuvhara-kuregedza kuita kweatatu eccentric simbi yesimbi butterfly vharafu, nekuti kana iyo vharuvhu yave pedyo nekuvhara, kuyerera kweiyo yepakati kwakanyanya kwazvo, zvekuti tsvina haigone kuunganidza pachigaro chevhavha.